Fanentanana Komitin’ny fifandraisan – tanana – FJKM Ambavahadimitafo Fanentanana Komitin’ny fifandraisan – tanana |
« Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan’i Kristy anareo koa ho voninahitr’Andriamanitra », Romana 15 : 7
Ry havana malala ao amin’i Tompo,
Alahady dimy sisa dia ho tonga ilay fotoan -dehibe nifanomezantsika tamin’ny Tompo sy ny Fiangonana hanatanterahana ny fifandraisan-tanana eo amin’ny Ray aman – dreny Mpitandrina mivady sy ny Fiangonana Ambavahadimitafo.
Koa miantso anao hitondra am – bavaka izany fotoana izany. Ary manentana anao hanatitra na ny fandraisanao anjara, na ny an’ny isam-pianakaviana hanatevenana ny kitapom – bola izay natokana hampitaovana ny Ray aman – dreny Mpitandrina eo am – panatanterahany ny asa izay nakinin’i Tompo sy ny Fiangonana amin’izany Ray aman-drenintsika izany. Tena adidiy ankinin’i Tompo amintsika ny fikarakarana azy ireo araka izay vitantsika ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Aza adinoina fa hisy Rakitra manodidina ho tanterahantsika amin’ny alahady izao. Koa ilazao ary ny fianakaviana sy ny zanaka ampielezana.
Miandry anao ny birao sy ny komity raha misy fanazavana misimisy tianao ho azo.
Dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitr’Andriamanitra.
NY KOMITIN’NY FIFANDRAISAN – TANANA.